कुण्डलीमा बृहस्पति कमजोर भए के हुन्छ ? के गर्नु पर्दछ ? « Khabarhub
कुण्डलीमा बृहस्पति कमजोर भए के हुन्छ ? के गर्नु पर्दछ ?
काठमाडौँ- बृहस्पती नवग्रहमा गुरु र मन्त्री मानिन्छ । यो ग्रह ज्ञानको सबैभन्दा ठुलो ग्रह मानिन्छ । बृहस्पति, धनु र मीन राशिको स्वामी तथा कर्कटको प्रिय बृहस्पति ज्ञान र विद्याको वरदान दिने मानिन्छ ।
नवग्रहमा बृहस्पतिलाई गुरु र मन्त्रणाको कारक पनि मानिन्छ । पहेलो रंग, स्वर्ण, वित्त र कोष, कानून, धर्म, ज्ञान, मन्त्र र संस्कारलाई यसले नियन्त्रित गर्दछ । यदि बृहस्पति कमजोर भएमा व्यक्तिको संस्कार कमजोर हुन जान्छ । विद्या र धन प्राप्तिमा बाधाका साथै व्यक्तिले ठुलाको सहयोग पाउन मुस्किल पर्दछ ।
कुण्डलीमा बृहस्पती कमजोर भएमा पाचन तन्त्र पनि कमजोर हुन्छ । यदि बृहस्पति अशुभ भएमा सन्तान पक्षको समस्या आउने गर्दछ । तर कुण्डलीमा बृहस्पति शुभ भए व्यक्ति विद्वान र ज्ञानी हुने गर्दछ । साथै अपार मानसम्मान पाउन सक्षम रहन्छ । व्यक्तिका ऊपर दैवीय कृपा प्राप्त हुन्छ । जीवनका तमाम समस्याबाट बच्न सकिन्छ ।
यस्तोमा बृहस्पति कमजोर भएकाहरुले नित्य बिहान बेसार मिसाएर सूर्यलाई जल अर्पित गर्नु पर्दछ । शिवजीको यथाशक्ति उपासना गर्नु पर्दछ । महीना एक दिन शिवजीलाई पञ्चामृतद्वारा अभिषेक गर्नु पर्दछ । बरको वृक्षमा नियमित जल अर्पित गर्नु पर्दछ । बडाको सम्मान गर्नु पर्दछ । यसो गरेमा कुण्डलीको बृहस्पति बलियो हुन्छ ।- एजेन्सीको सहयोगमा
प्रकाशित मिति : ३ माघ २०७७, शनिबार ५ : ४० बजे